jmichaelsmith Maarso 20, 2017 waxbarasho
Dunida, malaayiin dad ah ay isku dayayaan in ay wax ku bartaan Ingiriisi. Taas waxaa la samayn karaa siyaabo kala duwan: dugsiga, koorsooyinka in kooxaha la sheekaysanayo, laakiin waxaad baran kartaa afka ah oo u gaar ah.
About sida loo doorto habka ugu habboon ee wax-barashada, waxaan ku qoray blog dugsiga ee maqaalka «3 siyaabood ee caanka ah ee barashada af Ingiriisiga:. Dooran ugu fiican»
Shaqada Independent — arrin muhiim ah barashada English. Xitaa haddii aad samaynayso macallinka, weli waxaad u baahan tahay inaad dhexgalin mawduuc kasta oo dhan subtleties luqadda iyo iskaa. Waa adag tahay in la fahmo iyo in ay bartaan waano, ka dib markii baahida loo qabo in aad sameyso shaqada guriga ee Ingiriisi, arki mawduuca on iyaga u gaar ah si ay u badbaadin. Muhiimadda is-socodka ah ee barashada afku ay adag tahay in ay qiimayn.
Laakiin nasiib daro, qof kasta oo aan awoodin in ay ka qayb qaataan koorsooyin luuqadda bixiyo ama la Tababaraha shakhsi. Markaas waxaa u timid in ay gargaarka ee daraasadda madax banaan ee afka Ingiriiska.
The faa’iidada iyo khasaaraha ugu muhiimsan ee is-waxbarasho
Faa’iidooyinka ugu weyni ay yihiin kuwa soo socda:
Waa raqiis ah. Waxaad ka iibsan kartaa ama lacag la’aan ah buugga, podcast iyo in ay ka fogaadaan kharash dheeraad ah.
Freedom of barashada aan xad.
Fursad inaad wax ka barato waqtiga la doonayo iyo xawaaraha aad rabtid.
Horumarinta ee dareen mas’uuliyadeed.
Laakiin sida had iyo jeer, kulli wanaagga waxaa had iyo jeer waa Daqsi ee saliidda,
Caajisnimo. Mararka qaar waxaa aad u adag in aad naftaada ku qasbi fadhiistaan oo ay bilowdo inay wax ku bartaan luqadda.
Eebihii nadagjiyay guri. Haddii aad rabto in lagu sheekeysto, waxaad noqon doontaa adag si ay u bartaan Ingiriisi on iyaga u gaar ah.
Maamul waqtiga aad. Xirfadaha maamulka Time lama wada laha, sidaa darteed waxaa jirta khatar ah oo laga badiyay xawaaraha waxbarashada.
La’aanta jawaab. Marka aad adigu baro naftaada si, qofna ma caawin doonaa naxwaha iyo ku dhawaaq. Waxaad masuul ka tahay tayada waxbarashada.
Si aad u ogaatid Ingiriisi on iyaga u gaar ah, waxaad u baahan tahay in ay ka mas’uul oo si fiican u maamulidda waqtiga.
Halka laga helo waxyi?
Marka aad baratid af on iyaga u gaar ah, waxaa aad u sahlan in ay ku lumen badda ilaha maanta laga heli karo. Dabcan, waad dhagaysan kartaa oo daawado barnaamijyada in English (sida BBC ama CNN ama hawlaha buugga. Laakiin meesha laga helo Ingiriisi ah, haddii aadan ku nool dal ay ka jirto taas oo uu yahay qaran ah? Waxaad u baahan tahay oo kaliya in si taxadar leh hareerahaaga fiiri. Ingiriisi waa nagu wareegsan oo dhan.
Movies ama video gaaban ee Ingiriisi hadda la heli karo si dhan. Haddii aad daawashada filim la subtitles, isku day in aad eegto ka fogaataan gaalada, ama si fudud ay indhahana isku qabtaan waqti ka waqti. Waxaad arki, waxa aad ku maqli? Dabcan, marka hore waa ay adkaan doontaa inaan garto ee dhagaysiga, laakiin haddii aad si joogto ah u qabtaan shaqooyinkan, natiijada aad ku farxi doonaa.
Kiniiniga, calaamadaha iyo qoraalada ku Ingiriisi, sidoo kale, meel walba: TV-ga, kombuyuutarka, gaadiidka iyo dhar. Inta badan waxaan kaliya oo aan iyaga aragto. Erayadan Waxaad ka akhrisan kartaa? Waad fahantaa hagida ku qoran Ingiriisi?
Naadiyada iyo muxaadarooyin in English laga yaabaa in laga heli karo magaalada. Soo ogow haddii uu jiro koox meesha isgaarsiinta ee Ingiriisi.
By jidkii, in magaalooyinka waaweyn inta badan loo abaabulo kulamo Couchsurfing
Inta badan, shirkado shisheeye kuu diyaarin siminaaro ama bandhigyo, daabacaan qoraalo in English. Haddii aad rabto in ay noqdaan barnaamijyada ka shaqeeya shirkad caalami ah, weydii barnaamijyada in waxbarasho ee Ingiriisi ee takhasuska this ee magaalada. Ee ha baqina!
Blogs, forums mowduuc, bulshada. network — waxan oo dhan ayaa sii wadi doona xiisaha barashada afka on iyaga u gaar ah.
Ujeeddooyinka iyo qiimaynta kartida aad
Baro Ingiriisi on iyaga u gaar ah waxay noqon kartaa mid xiiso leh, laakiin waa adag tahay. Waxaa inta badan waa ay adag tahay naftaada guubaabinayo marka aysan jirin mid la kuwaasoo si ay u wadaagaan guulaha aad. Aad u adag in la ogaado heerka ay hadda aqoon, gaar ahaan haddii aad u bartaan afka dalkooda.
Sidaa darteed waa muhiim inaad naftaada dhigay gool muddo dheer iyo muddada gaaban. Tusaale ahaan, muddo dheer goolka — noqotay imtixaanka caalami ah dhamaadka sannadka. Hadafka muddada gaaban la barto laga yaabaa in xusuusta gabayga ee Ingiriisi ama fahamka ah headlines gaar magazine dhamaadka bisha. Si kastaba, gool uu ahaado macquul ah. Haddii aad tahay beginner set macno gool: «Waxaan doonayaa inaan hadla Ingiriisi dhamaadka bisha.» Waa inaad si daacad ah naftaada, garan xoogga iyo daciifnimo. Qaab dhismeedka waqti ayaa sidoo kale muhiim ah. Haddii aadan dhigay, waxaa suurtagal ah in laga badiyo dhiirogelin.
Barashada inay sameeyaan?
Haddii aad go’aansato in la sameeyo iyaga u gaar ah, go’aan habka barashada Ingiriisiga. Waa in aan noqon adigoo arko culays.
Go’aan ku saabsan shaqada ku meel gaar ah. Haddii aad tahay «guumays habeenkii», ku hawlan fiidkii, haddii «shimbir hore» — oo aroortii. Si joogto ah u shaqeyn doonaan, doorbidayo maalin walba, waqti isku mid ah. Xitaa haddii aadan muddo dheer, laakiin joogto ah, waxa ay ku siin doona natiijo fiican cashar laba saac toddobaadkii hal mar ka badan.
The casharada ugu waxtarka badan ee 60 ama 90 daqiiqo maalintii. Fursada fasax shan ama toban daqiiqo ah. Time for xafididda erayada tixgalin mudan oo dheeraad ah. Wax yar kadib markii uu maray wax ka mid ah 10-15 casharada daqiiqadii soo noq-bartay.
Dooro inaad wax ka barato halka aad doonaa in aan la soo dhibtay inta lagu jiro fasalka meel raaxo leh oo iftiin fiican leh.
Ka fiirso oo dhan hawlo waxbarasho, hadalka, akhriska, qoraalka iyo dhagaysiga, ku salaysan oo dhan dareenka. Isticmaal dhagaysiga, aragga, xubnaha iyo gacmaha hadalka.
Weeraryahan iyo weeraryahanka kaliya
Waxaa muhiim ah in aysan joojin in luqadda Ingiriisiga, waxaa si joogto ah u fulin lahaayeen aqoontooda. Si tan loo sameeyo, waxaad u baahan tahay in si habboon u isticmaali markii lacag la’aan ah, tusaale ahaan, guriga jidkii, ama inta ay sugayaan. Xitaa hadii ay daqiiqo toban kaliya, ay horumar doonaa in aad faa’iido. Isku day inaad turjumi weedho la afka hooyo, hadli hore ee muraayad la idin ku lug saaxiibo ama qaraabo tababarka.
Dabcan, ku celi waxa dhacay. Kaliya kiiskan, aqoontaada xoogaysan doonaan.
Eekow xawaaraha aad rabtid, si tartiib tartiib ah uu soo dedejinayo, laakiin ha ku degdegin inaad wax cusub, tusaale ahaan, farsamo oo degdeg ah. Dhaqanka Racing iyo impermanence xun u saameyn karto natiijada.
Ha iloobin in aad isku wax walba oo la gaadhay. Rumeeya aad xooggaaga, ka dibna aad ka adkaan kasta «dushooda afka.»
Iyo, dabcan, xiiseynaya dhaqanka, taariikhda, dhaqaalaha iyo juqraafi ee dalka luqadda aad ku baraneyso. Waa mid aad u xiiso in is-barashada English.
In dunida maanta fursado badan oo ay wax ku bartaan Ingiriisi. Ugu dambeyntii, ma jiraan wax xaq buuxda ama si khalad ah loo sameeyo. Waa in aan raadiyo wax adiga kugu habboon tahay. Qiimee farsamooyinkaaga, waqtiga, taas oo ay tahay in aad wax ka barato, iyo, haddii aad wax ku filan si ay u doortaan habkan.
Haddii aadan waqti badan ama umeerin hubin leeyihiin macallinka khibrad leh oo ka mid ah dugsiga.
The xirfadaha shaqada madax banaan oo aad si kasta oo faa’iido leh. Ku raaxayso barashada Ingiriisiga iyo ha joojin hore ee wax caqabado. Haddaba waxaad isku mahadsanid doonaa si aad u adkaysiga. Waa si fiican si ay u fahmaan waxa aad ku maqli ama akhriska Ingiriiska.
QISADII JACAYKA AHAYD EE ABWAAN ISMAACIIL CAGAF